Loolanka qoyska Deby ee hogaaminta Chad oo sii xoogaystay | Saxil News Network
Loolanka qoyska Deby ee hogaaminta Chad oo sii xoogaystay
April 26, 2021 - Written by editor
Sidii degdegga ahayd ee awoodda Chad loogu wareejiyey Gen Mahamat Idriss Deby geeridii aabihii ka dib ayaad moodda in ay muujinayso khatar ah in qoyska iyo milatarigu kala qaybsan yihiin taanisna keeni karto cawaaqib halis ah.
Mahamat Deby waxa iyada oo aan la isku waafaqsanayn loogu magacaabay hogaamiyaha golaha ku meel gaadhka ah isla markii la shaacinayey geerida aabihii 20 Abriil.
Haatan wuxuu madax u yahay koox ka kooban 15 xubnood oo u xil saran in ay dalka hogaamiso mudada ku meel gaadhka ah oo 18 bilood ah.
Laakiin warbaahintu waxay ku waramaysaa in qasriga madaxtooyada ay xiisadi ka jirto oo qaar ka mid ah qoyska madaxweynihii geeriyooday ay isku diyaarihayaan wakhti loolan adag ah oo dalka ku soo fool leh.
Madaxweynihii geeriyooday, Idriss Deby Itno, mudadii 30 sano ahayd ee uu talada hayey wuu ku xididaystay oo wuxuu xilal sare oo dawladeed u dhiibay xubnaha qoyskiisa waxaanu isku xeeray rag ay is gaashaan buursanayeen oo ka tirsan qabiilka Zaghawa ee uu ka dhashay.
Abriil 21 ayaa warbaahinta Chad baahisay in ay qasriga madaxtooyada dhexdiisa isku gacan saareen Mahamat Deby iyo walaalkii Zakaria Deby oo ay kala bah yihiin. Wararku waxay intaa ku dareen in khilaafku ka taagnaa kooga aabahood talada ka dhaxlaya.
Xubin sare oo ka mid ah golaha ku meel gaadhka ah ayaa ku gacan saydhay hadal haynta ah in rasaasi ka dhex dhacday madaxtooyada waxaanu wararkaa ku tilmaamay isku day “lagu khalkhal gelinayo dawladda”.
Intaan Mahamat la magacaabin, Zakaria Idriss Deby ayaa la sheegay in uun ka mid ahaa xubnaha ugu cadcad ee xilka la wareegi lahaa. .
Qoraalka sawirka,Hinda Deby Itno ayaa sidoo kale galaangal badan ku lahayd dowladda
Wuxuu wax ku bartay Tunisiya, sannadkii 2017 waxa loo magacaabay danjiraha Chad u fadhiya Imaaraatka. Waxa kale oo uu mar noqday gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga talada dalka haya.
Webiste-ka Tchadinfos ayaa qoraal uu Twitter-ka ku baahiyey ku sheegay in “aan la isku rasaasayn qasriga madaxtooyada oo aan wax muran ahi ka dhicin” taas oo sida muuqata wargeyskaa xukuumadda taageera isku dayey inuu muujiyo in midnimo jirto.
Laakiin khilaafka qoyska madaxweynaha ka dhex taagan muddoba dadku way tuhunsanaayeen
Madaxweynaha geeriyooday dhawr dumara ayuu qabay, waxaana ugu caansan Hinda Deby Itno.
Hinda waa 41 waxaana dhalay diblomaasi ruug caddaa ah oo reer Chad ah, waxa ay sidoo kale ahayd xoghaynta gaarka ah ee madaxweynaha ka hor intii aanay is casilin si ay ugu gacan banaanaato urur khayri ah oo ay aasaastay oo la yidhaa Grand Coeur. Sidoo kale waxay door weyn ku lahayd maamulka shidaalka Chad
Dhawr walaalaheed ka mid ah ayaa ka shaqaynayey madaxtooyada,waxaanay awood u lahayd in ay saamayn ku yeelato cidda loo magacaabayo xil ama laga qaadayo.
Walaalkeed Khoudar Mahamat Acyl wuxuu ahaa gacnyaraha madaxweynaha. Wuu la socday markii Madaxweyne Deby dhaawaca culusi ka soo gaadhay dagaalkii ay ciidamadiisa iyo fallaagadu isku haleeleen ee ka dhacay gobolka woqooyi ee Kanem.
Saddex kale oo walaalaheed ah ayaa iyaguna kala ahaa wasiirka caafimaadka, wasiirka cadaaladda iyo wasiirka waxbarashada.
Dalka Chad oo gabdhaha yaryar tacaddiyo jinsi looga geysto
Bishii Jeeniweri ee 2020 mar uu madaxweynuhu bukooday, waxa uu maamulka xafiiska madaxweynaha kaga sii tagay marwadadiisa Hinda, oo wuxuu diidanaya in ay isku dhacaan Mahamat iyo Zakaria, sida uu ku waramay website-ka Zoom Tchad.
“qorshaha Idriss Debby ee ahaa in ay afadiisu awoodiisa sii haysaa wuxuu ahaa tilmaan muhiima oo muujinaysa in aanu labadiisa wiil midkood na xilka la doonayn. Arintaasi waxay sidoo kale dhabbe u jeexaysaa colaad iyo dagaal ku dhex mara labadooda oo ah ka noqon doona ka xilka ka dhaxli doona aabahood” ayuu website-ku waagaa ku sheegay warbixintiisaa.
Loolanka oo gaadhi kara milatariga
Khilaafka muuqda ka taagan cidda xilka ka dhaxlaysa madaxweynaha geeriyooday ee dhexyaal xubnaha qoyskiisa ee kala danaha ah gaar ahaan dhanka ciidanka, ayaa saansaantiisu u muuqataa inuu gaadhayo milatariga qudhiisa.
Janaraalka ruug caddaaga ah ee Abderamane Dicko ayaa duray golaha cusub ee ku meel gaadhka ah. Ninkan oo hore u ahaan jiray hogaamiye jabhad ah ayaa weli ka tirsan milatariga Chad waxaana la sheegaa in ay daacad u yihiin askar diidan hogaaminta Mahamat Deby.
Jan. Dicko wuxu ku tilmaamay golaha milatariga ee talada haya “koox kooban oo saaxiibo ah” waxaanu sidoo kale ku baaqay in si “dhakhso ah loo dhiso gole sal ballaadhan oo loo dhan yahay oo laga wada tashaday inaan dalku cagaha la gelin qas”sidaana waxa ka soo xigtay wargeyska Tchadanthropus oo ku waramay.
Hadii qoyska Deby iyo saraakiil badan oo kale oo ka tirsan ciidanku ayay si cad uga hor yimaadaan hogaaminta Mahamat Deby, xiisaddu way sii cakirmi kartaa oo waxay xagal daacin doontaa dedaalka xukuumadda ku meel gaadhka ahi ku doonayso in ay ku xasiliso Chad oo muddo soddon sano ah nin keli ahi xukumayey